Uummata Oromoo fi Qeerroo Oromoo hundaf
Warqeen Najoo irra Austeralian basuuf deemtu dura dhabatamu qaba.
Waan kun siiriti ilaalamu barbaachisa sababa qaba waan ta'eef:-
1ffaa Warqeen wagootaa 100 lafa Oromoo keessa guramee Oromoof dhukuba malee bu'aa tokko ilee hin fine,
2ffaa Ijoolleen Najooti dhalatan baayeen isaan dhukuba onnee qabu kun rakkon isaa hin baramne, Albbuda lafa najoo jala jiru kana irra ta'aa ykn ammo xurii Nuclera awwalametu jira ta'aa bara dargi,ijoollen Najooti dhalatan dukkuba lapheen rakkatan akka isaan yaalamaniif caaraqii shamareen Oromoo Obse Luboo qoofa ishee gocha jirtu mootummaan Ethiopia garuu daa’iman kana bararuuf yaalii tokkolee gocha hin jiru.
3 ffaa bara paarlamaa jiru Qoorannon UNCEF fi EC wa’ee quufa morma (Goiter ) irratti qoorannon godhame hanga yoona hojiti hin jijjiramne, quufii mormaa da’iman fixaa jira.
4ffaa baruma paarlamaa ture wa’ee Soil Acidity ykn biyyen suuma'uu paarlamaati dhiyeesine falmacha ture hanga amma mootumman furmata hin laneef Aannaleen Najoo, Bojii, Manasibu,Qilixu Kara fi Innango biyoon manca'ee uummatni qootate jirachu hin dandeenye kun hundi dura furmata argachuu qaba. Mootuuman rakkolee Lixa Wallga jiran kana utuu hin furiin wa’ee Warqee basuu irratti bu'aa uummatni argatuu utuu hin dabatamin namni achii deemu lubuun isaa galuu hin qabu, Namichi Mootummaa maqasa jedhamu TPLF Labsii yeroo muudamaa paarlamaa irratti harka base uummata Najoof garii hojeeta jene hin yaadnu.
Akkuma Beektan wagoota 100 ol warqeen lafa Oromoo irra guramu jireenya Oromoo balleesun ala qileensa Oromoo faluu fi Bosona Oromoo mancasun ala Oromoof bu'aa tokko buse hin beeku. MEDROK Ethiopia (shek Alamdin) wagoota 20 lafa Oromoo irraa tola warqee guracha jira, ijoollee Oromoo summi warqee ittiin miicanin dhuma jirti. Oromiyaa fi Oromoon kana irra waan tokko argate hin beeku. Kana booda warqeen Oromoo kan ba'uu qabu ijoollee Oromoo qoofan ta'uu qaba. Warqee Gujii ijoolle Gujjitu itti fayadamu qaba, kan isaan irra hafe biyyatitu itti gargarma, kan wallaga ile uummatichatu itti faayadamu qaba.
Dhimma Oromoo fi qabeenya Oromoo keessa gale federaali ajaajuf mirga hin qabu. Federaali waaraana uummata Oromoo Calii Calanqooti irratti bobasse lubuu 18 ajjeese utuu lubuu darbeef jecha tokko hin dubatiin, guyyaa 3 booda ammoo Aanaa Hawwii Guddinati lubuu nama ajjeesan, kumataman lafa isaa irra buqisan, mana Oromoo 80 ijoollee xixina waliin waltti guban. Oromoo akkastti rakacha jiruf namni inni waan tokko hin dubatiin lafa Oromoo warqee isaa baafatan guuguraachuuf mediati ba'an labsuu yaalun saba Oromoof tufii qaban argisisa. Kanaaf kana kaanfakatan ilaalcha keessa galchudha, kana booda lafa Oromoo irra inivesteriin kara federaala dhufe millan akka lafa Oromoo keessa hin bane, qeerroon Oromoo fi uummatni Oromoo tarkanfi keessa hin deebine fudhachuu qabdu, faranji ykn guracha ykn mootumaa ykn investeri fedhe yoo ta'ee kana booda nagaan warqee miti biyyo falana tokko fudhu hin danda'uu biyyoo isaa Tigirayti gurtan iyuu gara fuuladuratti hunda isaa ni deebiftu jedha.
Yaadachiisa;- Bakka Warqee kana qeerroon Oromoo Map isaa kasuun fakeenya isaa fi tesumma lafa isaa akka nu ergitan isiini dhamna. Hale Mariyam Desalenyi, Samora Yenus fi Abdi Ileeyi Seerati utuu hin dhiyyatin Oromiyya federaala irra ajjaaja ykn waligalte tokko ilee waan gotu hin qabdu, federaali ofi isaati seera hin egisisin Oromiyyan Federaala irra ajaaja fuudhatu hin qabdu. Qeerroon Oromoo investment Oromoo fi Oromiyya midhu akka lafa Oromoo irratti hin godhamne gochun dirqama keessan, egeren Oromiyaa kan keessan waan ta’eef.
lafti keenya lafee keenya!!!